Republic of Ireland vs Serbia - World cup ruru eru | Bet Atụmatụ
Match ụbọchị: 5 Sep 2017 | Ihe: 5 Sep 15:24 2017 GMT + 2 | NDỤMỌDỤ anya 1259 ugboro.
Republic of Ireland vs Serbia – World cup ruru eru
Republic of Ireland vs Serbia – World cup ruru eru, Ireland na Serbia na 8th gburugburu nke Group D. Ugbu abụọ mbụ enịm n'akụkụ. Serbia bụ abụọ ihe doro anya na top ke eti ndị ọzọ ụbọchị n'ụlọ na-adịghị ike Moldova 3:0 mgbe Ireland were dị nnọọ ebe n'okporo ụzọ na Georgia, 1:1.
O doro anya na maka Ireland omume mmeri ebe a bụ ibu oké mkpa. Serbia ga na-na-eduga ọnọdụ ọbụna na Olee mgbe Ireland ma ọ bụrụ na na-emeri nwere ike ida ọbụna n'ọnọdụ nke abụọ ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ nwere ike na-kegide na Wales mgbe a gburugburu. Ya bụ Wales na na na ụzọ kama megide adịghị ike Moldova ebe ihe atọ na-atụ anya. Ọ bụghị na-ekwurịta na October ga-eso dakọtara Wales vs Ireland. Ya mere, na ihe mere na Ireland eleghị anya ga-abụ ihe na-elekwasị anya awakpo. Ma na Serbian otu onye ọ bụla na-ekwu, otú ha na-aga ebe a niile ihe atọ ma si otú ụfọdụ n'aka iji nwetara ụzọ ma kpọmkwem Visa maka World Cup.
Republic of Ireland vs Serbia – World cup ruru eru,ka, ihe niile a bụ na mbụ okwu okwu okwu (si n'akụkụ abụọ) ma mgbe ndị dị otú ahụ mkpa game mmalite, n'ezie anyị na-emekarị wont ịhụ ihe ọ bụla nke na. Echere m, mgbe ma ìgwè bụ ”aga n'ihi a mmeri” na-emekarị-esi na-adị nnọọ akọ obibia si n'akụkụ abụọ, fọrọ nke nta ka ọ dịghị ihe n'oge niile, dịkarịa ala na ụfọdụ n'oge ogbo. Ọzọkwa 0:0 na ọkara na-emekarị-eme. Dị nnọọ anya na ụnyaahụ egwuregwu n'etiti Montenegro na Romania ebe ụsụụ ndị agha dị mkpa mmeri nke ukwuu, Romania ọbụna na mmeri ga-usoro iwu Ohere, enweghị mmeri na-adịghị ọbụna n'ọnụ, ya mere, ọ na-atụ anya na ha ga-aga ike niile ihe atọ. Ma n'ezie na ọ bụ mara mma na-agwụ ike egwuregwu ebe abughi otu e adịghị achụ ka ukwuu maka a mmeri na fọrọ nke nta ka rụchaa 0:0.
The mbụ ibe game n'etiti Serbia na Ireland keere Belgrade biri na 2:2 ise. Maa bụghị pịnye nke game m atụ anya ịhụ ugbu a. Mgbe Serbia egwu n'ụlọ, na-abụkarị nnọọ iwe obibia si ha n'akụkụ. Plus, azụ mgbe ha bụ ndị na-enweghị ụzọ goalkeeper Stojkovic na-eto eto Rajkovic bụ na ihe mgbaru ọsọ. Rajkovic bụ nnọọ nkà ma n'eziokwu, ọ na-ahụ maka ma ihe mgbaru ọsọ Serbia ka conceded n'oge ahụ. Ugbu a na Stojkovic, Serbian agbachitere ga-ele anya n'ụzọ ike. Nke a Ihọd zọpụta Serbian otu ọtụtụ ugboro.
Na mkpokọta, Imo Ireland ga na o siri ike na-enwe ike Akara, Serbia eleghị anya ọ bụghị kwa offensively gbakwasara, eleghị anya ma ìgwè bụghị kwa offensively gbakwasara na mbụ 45 nkeji.
Akpa ọkara Olee Imo dị ukwuu nzọ ebe a.
Mallorca vs Ath Bilbao ( n'okpuru 2.5 ihe mgbaru ọsọ & 1.50 )